U-VVO USENQUME UKUZAKHELA IZIFONYO NEZIHLAMBI-ZANDLA - Ilanga News
Home Izindaba U-VVO USENQUME UKUZAKHELA IZIFONYO NEZIHLAMBI-ZANDLA
U-VVO USENQUME UKUZAKHELA IZIFONYO NEZIHLAMBI-ZANDLA
uDkt uDkt Velaphi Bhedlindaba “VVO” Mkhize nezifonyo azakhela zona.isithombe: sithunyelwe
USENQUME ukuzakhela izifonyo (masks) nezihlambizandla (saniti-zer) ezinophawu lwakhe ukuhlinzeka amakhasimende akhe nabantu abafuna ukuzidayisela umsunguli woMsamo Institute, oyisazi samasiko futhi ongumelaphi wendabuko, uDkt uDkt Velaphi Bhedlindaba “VVO” Mkhize ukuhlelela ukuthi uma sebevumelekile ukusebenza, angabhekani nenkinga.
Ngaphandle kwalokho, usethenge ne-tunnel sanitizer – lapho umuntu engenela khona ahlanzwe umzimba wonke nethuluzi elihlola amazinga okushisa komzimba.
UDkt Mkhize uthi wenza lokhu nje, yingoba uthole ulwazi komunye wabahlobo bakhe ongusolwazi eWuhan University of Science and Technology, eChina, othe kungaba wusizo olukhulu ukulalela imiyalelo ekhishwa wuhulumeni, kubandakanya nakho ukusetshenziswa kwezifonyo nezihlambizandla, ukuze kunqandeke ukubhebhetheka kwe-coronavirus.
Uthi ubuze lo mhlobo wakhe ukuthi balinqande kanjani leli gciwane, wathi konke umphakathi obutshelwa khona ubukwenza.
Uthi ngalesi senzo kusinde abantu abawu-3 600 abangaphezulu kweminyaka ewu-80 ubudala, nabawu-7 abebeneminyaka engaphezulu kwekhulu ubudala.
Okunye okusize kakhulu wukuthi kusetshenziswe imithi yendabuko yakhona eChina njengalokhu bedume ngayo nanamuhla.
“Ngesikhathi ngisebenzela enye yezinkampani ezikhiqiza ziphinde zithengise imithi yaseChina, iTianshi esekhona eNingizimu Afrika namanje ngathola ukuthi bakholelwa kakhulu ezintweni abathi bazinikwa belele ngamathongo abo futhi okunye kwakho okuphuma endaweni enjengesigodlo kubona yikhona abakuhambisa phambili kakhulu.
“Lokhu kungenze ngaqoma ukuzenzela lezi zifonyo nezinhlambizandla ezizokuba nophawu lwasesigodlweni sami eMlambomunye, okuwuMsamo Institute. Lezi zivala mlonyeni zizokwakhiwa ngendlela ephephile, okulindeleke ukuba ihambisane nemigomo yezempilo, ibe zindwangu zintathu njengalokhu kulindelekile, kuzona zonke izifonyo,” kusho uDkt Mkhize.
Uthi inkampani ebenzelayo bayidonse ngendlebe ukuthi ngesikhathi yakha lezi zinto, into ebalu-leke ukuzedlula zonke kubona yinhlanzeko nesiqiniseko sokuthi kulandelwe yonke imigomo.
Ebuzwa ukuthi kungani ethathe lesi sinqumo, uthe: “Konke esikwenza eMsamo Institute ngesandla sesigodlo saseMlambomunye, siqonde ukuqhakambisa ukuthi isintu sethu, amasiko nempande yabadala yikhona okuyosiza lesi sizwe esimnyama.
“Okumqoka kakhulu wukuthi ngalokhu ngizama ukufaka inselelo nakwabanye abelaphi bendabuko nezigodlo zabo ukuthi kunanoma yini evelayo, masiveze isandla ngokutshengisa ukuthi nathi siyakwazi ukwenza into ezosiza umphakathi kunokuba silindele imali engenayo kuphela ekhishwa ngabazofuna usizo.
Sishiywe ngaphandle njengabelaphi bendabuko kukhona konke okuthinta iCovid-19, ngakho masikhombise ukuthi mhla kuvela olunye ubhubhane, nathi sibonwe njengabantu abangabamba iqhaza elikhulu,” kusho yena.
Uthe mhla sekuvulwe izikole, uzohambela izikole ezimbili afunda kuzona, KwaMpande Secondary School, eKwaMpande, eMgu-ngundlovu naseVukuzakhe High School, eMlazi ayokhuluma nothishanhloko bakhona ngenhloso yokunikela ngalezi zifonyo njengendlela yokubonga kulezi zikhathi ezinzima ukuthi ulapho ekhona namhlanje nje, wadlula emagcekeni alezi zikole.
Previous articleimbumba inikelele abahlwempu
Next articleunzima emndenini obhidlikelwe yindlu